နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယအကြိမ် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
by Thinmbadm1n / Apr 27, 2017 / comments
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ခိုင်မေကြူတို့အား အမှူးထား၍ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် (၈:၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ် (၄၂) စုပေါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနား သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်နှင့်ဇနီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ် နှင့်ဇနီး၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့်ဇနီး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်ဇနီး နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရန်လျာထားသည့် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်
by Thinmbadm1n / Apr 26, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ ၂၆ ရက်
GIS နည်းပညာအသုံးပြုမှု ရှင်းလင်း
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ ၂၆ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအပေါ် ဒေသအတွက် အကျိုးရှိမှုနှင့် လုပ်ငန်းများထပ်မနေစေရေး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
by Thinmbadm1n / Apr 25, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံး (OCHA) ၏ OCHA Donor Support Group (ODSG) အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
by Thinmbadm1n / Apr 24, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ ၂၄ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံး (OCHA) ၏ OCHA Donor Support Group (ODSG) အဖွဲ့သည် ယနေ့နေ့လည် (၁) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံ ခဲ့ပါသည်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသည့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သည့် စာရင်းနှင့် လူတွေ့ဖြေဆိုရမည့်ရက်ကြေငြာခြင်း
by Thinmbadm1n / Apr 20, 2017 / comments
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ
by Thinmbadm1n / Apr 19, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ ၁၉ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen သည် ယနေ့ နေ့လည် (၁၅:၃၀) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ ပါသည်။
ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်း လမ်း/တံတားဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်
by Thinmbadm1n / Apr 12, 2017 / comments
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၂ ရက်
ဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင်း လမ်း/တံတားဖွင့်ပွဲများသို့ တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်
by Thinmbadm1n / Apr 11, 2017 / comments
နေပြည်တော် ဧပြီလ ၁၁ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲနိုင်နှင့် ၀န်ထမ်းများ တွေ့ဆုံဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ ၇ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲနိုင်နှင့် ၀န်ထမ်းများ တွေ့ဆုံဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကို ယနေ့ နေ့လည် (၃) နာရီ အချိန်တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စုပေါင်းအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆိုလာစနစ်ဖြင့် သောက်သုံးရေရရှိရေးလုပ်ငန်း လွှဲပြောင်းပေးအပ်
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ရက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား Global Commission on Drug Policy (GCDP) ဥက္ကဌ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း လာရောက်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ဧပြီလ ၇ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့အခြေစိုက် Global Commission on Drug Policy (GCDP) ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း Ms. Ruth Dreifuss သည် ယနေ့နံနက်(၁၁) နာရီ အချိန်တွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်အား အမေရိကန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆ
by Thinmbadm1n / Apr 04, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ ၄ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်အား အမေရိကန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel သည် ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီ အချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
၀န်ကြီးဌာနတွင်း ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (GPMS) အသုံးပြုနည်း မွမ်းမံသင်တန်း
by Thinmbadm1n / Apr 03, 2017 / comments
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများရှိ ဝန်ထမ်းများအား ဝန်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (GPMS) ဖြင့် Data အချက်အလက်များ ပြုစုရေးသွင်းနိုင်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် (Government Personnel Management System–GPMS) အသုံးပြုနည်း မွမ်းမံသင်တန်းအား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ညွှန်ကြားချက် နှင့်အညီ ယနေ့နံနက် (၉) နာရီအချိန်တွင် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ စုပေါင်းအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။